कोरोनालाई जितेकी नेपाली नर्सको बेलायतबाट पत्र ! – Koshidaily
कोरोनालाई जितेकी नेपाली नर्सको बेलायतबाट पत्र !
access_alarms Koshi daily ४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०५:५२	chat_bubble_outline 0	Comments
यशोदा पौडेल : आदरणीय बुबा आमा, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु, दर्जा अनुसार ढोग, नमस्कार एवं माया ।यतिबेला विश्व कोरोनाको महामारीका वि’रुद्ध ल’डिरहेको छ। आफ्नो जन्मभूमी भन्दा धेरै टाढा कर्मभूमीमा, अर्थात बेलायतमा त्यही महाशत्रुको विरुद्ध अग्रपङ्तीमा लड्दा लड्दै म आफै घाइते हुन पुगे । झण्डै तीन हप्ता लामो संघर्षपछि उ मसंग पराजित भयो ।
भनौं मैले यु’द्ध जिते । आज मेरो जन्मभूमी नेपाल पनि को;रोनाबाट त्रस्त छ । तर यथार्थ के हो भने, विश्व मै मेडिकल सिस्टम ठिक भएको भनिएको बेलायत त यसको सामुन्ने घुँडा टेक्न विवश छ भने नेपालका लागि को;रोनाको संक्रमण झनै घातक हुन सक्छ । त्यसैले यसका वि’रुद्धको ल’डाईमा मेरा आफन्तलाई केही उर्जा दिन सक्छु कि भन्ने ठानेर यो पत्र लेख्दैछु ।पेशाले म ए नर्स हुँ ।
मैले त्रिबि चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थात अर्थात पोखरा नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ उत्तिर्ण गरेकी हुँ । विगत १४ बर्ष देखि बेलायतको रेडिङ भन्ने शहरमा न’र्सिङ पेशामा आवद्ध छु । रेडिङस्थित रोयल बक्सायर हस्पि टलको अपरेशन थिएटरमा मेरो जागिर छ । को;रोना महामारी बेलायतमा पनि बिस्तार भएपछि हाम्रो हस्पिटलमा पनि विरामी आउनु स्वभाविकै हो ।
तिनै बिरामीको सेवा गर्दा गर्दै म पनि भाइरस सं’क्रमित बन्न पुगे । हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि को;रोना एक घा’तक भाइरस हो । तर यो बदनाम रोग चाही होइन । यो मान्छेबाट मान्छेमा सहजै सर्ने भएकाले विश्वलाई निकै चुनौती बनेको छ । संसा रका बैज्ञानिक लागकै छन, यसको औषधी वा भ्याक्सिन पत्ता लगाउन ।विश्वास गरौं छिट्टै पत्ता लाग्नेछ र हामी विजयी हुनेछौं ।
अब म मेरो भोगाई तर्फ यहाँहरुलाई लैजान चाहान्छु । सधै जसो मार्च १७, २०२० मा विहान ७.३० बजे म काममा गएकी थिए । त्यो दिन भन्दा अघि पनि नियमित काममा गएकै थिए । अस्पताल पुगे पछि मलाई ज्वरो आएको महसुस भयो । आफै ज्वरो नापे, सामान्य भन्दा धेरै नै थियो । अनि म आराम गर्न भन्दै घर फर्के । अलिअलि खोकी पनि थियो । केही दिनसम्म ज्वरो आउने जाने क्रम रहिरह्यो ।
मेडिकल टिमसंग सल्लाह र परिक्षणपछि मलाई को;रोना सं’क्रमण भएको पुष्टी भयो । बेलायतमा हाम्रो तीन सदस्यीय परिवार छ । म, मेरा श्रीमान र छोरा । उनीहरुसंग आइशोलेट भएर बँसे । ज्वरोले च्याप्दै जाँदा मलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो । शरिर यस्तो दुख्थ्यो कि बर्णन गरेर साध्य छैन । टाउको फुटे जस्तै लाग्थ्यो । शरीर लगलगी काप्ने । निकै कमजोर महुसस हुन्थ्यो ।
को;रोनाले विश्वभरी मान्छेहरु म’रिरहेका थिए । यी खबरबाट म बेखबर थिइन । त्यसैले मनमा डर लाग्नु, अनेकन सोच आउनु स्वभाविकै थियो। फेरि शरीरको दुखाईले घरी घरी त जिन्दगी यत्ति नै रहेछ कि भन्ने पनि नलाग्ने चाही होइन ।तैपनि मैले हिम्मत हारिन ।खानामा विशेष ध्यान दिए । खाना खान त मन लाग्दैनथ्यो तर खाना नखानु भनेको झन कमजोर बन्नु हो भन्ने मलाई थाहा थियो ।
को;रोनाले सबै भन्दा कमजोर पार्ने हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली मै हो । त्यसैले श्वास प्रश्वासको ब्यायाम गर्न छोडिन । को;रोना सं’क्रमिततलाई सास लिन फेर्न गाह्रो हुनु भनेको सबै भन्दा घा’तक लक्षण हो । ममा त्यो लक्षण आउन नदिन विभिन्न यु ट्युब च्यानलहरु हेरेर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न ब्यायाम गरिरहे । जसले मेरो फोक्सो कमजोर हुन दिएन ।
छाती अर्थात फोक्सो र घाटी जोगाउनका लागि तातो पनि जति सक्यो धेरै सेवन गरे । नियमित रुपमा बाफ लिने काम पनि गरिरहे ।मैले सधै सकारात्मक सोच राखिराखे । र विश्वास गरे कि म यसलाई जित्ने छु । मेरा श्रीमान पनि पेशाले डाक्टर हुनुहुन्छ । उहाँले मलाई सधै सकारात्मक सोच्न र आत्म बलियो बनाउन प्रेरित गरिरहनु भयो । उहाँको मायाले मलाई को;रोना वि’रुद्धको ल’डाई लड्न बल मिल्यो ।
ब्यायामको भुमिका र खान पिनको महत्वलाई ध्यान दिएर हौसला दिइ रहनु भयो ।लण्डनमा हाम्रो परिवारको तेश्रो सदस्य, छोरो छ । १९ बर्षीय छोराले मलाई कत्तिबेला पनि कमजोर अुनुभुती हुन दिएन । उसमा भाइरस नसार्नका लागि म पूर्ण सजग थिए । हामी एक आपसमा सम्पर्कमा त आएनौं, तर पनि मलाई एक्लो महसुस हुने वातावरण पनि बनेन । परिवारको माया र साथिसंगीको साथ पाइरहे ।
जसले गर्दा मलाई प्राण घा’तक को;रोनाका वि’रुद्ध विजयी सं’घर्ष गर्न आत्मबल मिल्यो ।यसर्थ म यो भन्न चाहान्छु की तपाईको परिवारमा कसैलाई लक्षण देखिएको खण्डमा उस लाई माया र सम्मानको नजरले हेर्नु होला । साथी भाइ इष्टमित्र छरछिमेक कसैलाई को;रोना संक्रमण भयो भने पनि इज्यत दिनु होला । मनोबैज्ञानिक ढंगले सबल बनाउन सक्दो भूमिका खेल्नु होला ।
यो भा’इरस वि’रुद्धको लडाई कमजोर आत्मबल भएको मानिसले जित्न सक्दैन । मान्छेलाई आत्मै देखि बलियो बनाउनका लागि माया, प्रेरणा र हौसला बाहेक अर्को कुनै हतियार छैन ।लगातार १३ दिनको ज्वरोपछि मलाई बिस्तारै सहज हुँदै गयो । ज्वरो आएको बेलामा ६–६ घण्टामा एक ग्राम पारा सिटामोल नियमित सेवन गरे । यसले शरिरको दुखाई हल्का गराउथ्यो भने ज्वरो पनि केही कम गर्दथ्यो ।
अहिले म पूर्ण रुपमा स्वस्थ भएकी छु । र फेरि नियमित काममा फर्केकी छु । अहिले पनि मेरो दायित्व भनेको कोराना सं’क्रमित बिरामी कै सेवा गर्नु हो, र गरिरहेकी छु । मलाई विश्वास छ कि म ती अमूल्य जिवनहरु जो अहिले आइ सियुको बेडमा मृ’त्युसंग ल’डिरहेका छन, उनीहरुलाई बचाएर मेरो मानवताको ध’र्म निभाइरेको छु, निभाइ रहने छु ।त्यसैले म भन्छु, अहिले यसको औषधी छैन ।
यसबाट सकेसम्म जोगिनु सबै भन्दा उत्तम बिकल्प हो । तर कसलाई कति बेला सर्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन । जुनसुकै बेला पनि आफु को;रोना भाइरसबाट सं’क्रमित हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा मानसिक रुपमा तयार हुनैपर्छ, र ल’डाई जित्ने आत्म विश्वास बनाई राख्नु पर्छ । चार शब्दमा भन्न चाहान्छु– सकारात्मक रहनु, सकारात्मक सोच्नु ।धन्यवाद ।